ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်. ဤအစာကျွေးသောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်ပြောင်းဖူးမှစီးပွားဖြစ်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, အစေ့, ပရိုတိန်း, သကာရည်နှင့်အစ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးလုံးလေးများ, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ကြွယ်ဝသောအာဟာရများနှင့်ဒဏ်ငွေ texture, ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုငါးများကဲ့သို့ရေနေသတ္တဝါများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အပူပိုင်းဒေသငါး, ငါးခူ, ပုစွန်, ခွေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ငါးများအားအစာကျွေးခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည် ငါးအစာကျွေးစက်,ငါးအစာကျွေး,ငါးအစာရောနှော,ငါးအခြောက်ခံစက်,နှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ,ဤအစာကျွေးသောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်ပြောင်းဖူးမှစီးပွားဖြစ်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, အစေ့, ပရိုတိန်း, သကာရည်နှင့်အစ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးလုံးလေးများ, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ကြွယ်ဝသောအာဟာရများနှင့်ဒဏ်ငွေ texture, ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုငါးများကဲ့သို့ရေနေသတ္တဝါများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အပူပိုင်းဒေသငါး, ငါးခူ, ပုစွန်, ခွေး, ကြောင်နှင့်အရာများသင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံသောငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများလည်းရှိသည်။ ဤရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်မွေးမြူထုတ်လုပ်သောတိရစ္ဆာန်အစာတောင့်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။, ထူးခြားတဲ့အရသာ, တိရစ္ဆာန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစာစားခြင်းအလေ့အထကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည် Halibut လုံးလေးများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောငါးအမျိုးမျိုးအတွက်လုံးလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးခူလေးများ, CatCarp တောင့်တင်းသည်, ရောက်ရေချိုငါးလုံး, Hemp လုံးလေးများ, CSL လုံးလေးများ,စသည်တို့.
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်းများအစာကြိတ် grinder အားဖြင့်လိုအပ်သောအရွယ်အစားမှကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရပါမည်. တူစက်, Wide chamber Fine feed Hammer စက်ကိုလည်းခေါ်သည်, အဓိကအားဖြင့်အထူးရေအစာကျွေးရန်အတွက်အစားအစာများကြိတ်ဆုံကြိတ်ရန်အဓိကအသုံးပြုသည်.
2. ပစ္စည်းရောစပ်—feed mixer
ပစ္စည်းကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောစပ်ပေးခြင်းသည် extruding ထိရောက်မှုရှိစေပြီး feed အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ feed mixer သည်အမှုန့်နှင့်သကာရည်များကဲ့သို့အရည်ကိုပိုမိုအညီအမျှထည့်သွင်းပေးမည့် atomizing spraying system ဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။.
3. လုပ်ငန်းစဉ် extruding— ရေပေါ်အစာကျွေးတောင့် extruder
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်: ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးခြင်းပြုပြင်စက်နှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားသည်လေအေးပေးစက်နှင့်အတူဖြစ်ပြီးရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်, ထို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာထုတ်စက်သည်ကြီးမားသောအစာတောင့်စက်ရုံအတွက်သင့်တော်ပြီးခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွက်ခါးပတ်ခြောက်စက်သည်အစဉ်အမြဲရွေ့လျားနေသောခါးပတ်ခြောက်စက်ဖြစ်ပါသည်. extruder မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောအတောင့်အတောများကိုဝါယာကြိုးကွက် (သို့) ဖောက်ထားသည့်ပန်းကန်ခါးပတ်ပေါ်တင်ပေါ်တွင်အလွှာများထည့်။ ခြောက်သွေ့သောအခန်းများမှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်သည်။. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, ခြောက်သွေ့သောလေထုကိုထုတ်ကုန်အလွှာများမှအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသည်. သငျသညျစိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာကျွေးစက်ကိုရွေးချယ်ပါလျှင်, ကျနော်တို့ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားလုံးလေးများလေမှုတ်စက်အကြံပြုပါသည်.
အချောတောင့်များကိုသိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူစေရန်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏မျက်စိဖမ်း, သူတို့စနစ်တကျထုပ်ပိုးရပါမည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်နှင့်အတူ, အချောတောင့်အိတ်သို့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်, အလေးချိန်, ပါး, နှင့်အလိုအလျှောက်တံဆိပ်ခတ်, ၎င်းသည်လုပ်အားနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်. ဒီထုပ်ပိုးစက်သည်, အလိုအလျောက်အပူစာရိုက်ကုဒ်, အလိုအလျောက်အိတ်အပ်ချုပ်နှင့်အလိုအလျောက်ချည်ဖြတ်တောက်ခြင်း optional ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနိုင်ပါတယ်.
ပစ္စည်း ဓာတ်ပုံ ပါဝါ
(kw) စွမ်းဆောင်ရည် （ကီလိုဂရမ် / h) အရွယ်အစား
ဝက်ခြံပေါ်ကို 2.2 1000-2000 6500*450*700 290 ကုန်ကြမ်းအစာကျွေးသည်
စတော့အိတ်ဘင် / 2.5M3 1850*1650*1800 260 ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရန် ,
ဖုန်စုပ်စက် 5.5 1000-2000 1300*800*1500 280 ကြိတ်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးအတွက်
ရေစက်ကြိတ်ခွဲစက် 22 1000-2000 2000*1050*1350 950 ကုန်ကြမ်းကြိတ်သည်
ရေပုံးဓာတ်လှေကား31500-2000 6500*1150*500 420 ရောနှောစက်မှအမှုန့်ပေးပို့ဖို့
ဝက်အူပေါ်ကို31000-2000 6500*450*700 290 ရောနှောစက်မှအမှုန့်ပေးပို့ဖို့
အလျားလိုက်ရောနှောခြင်း 15 500ကီလိုဂရမ် / အသုတ်
မိနစ် / အသုတ် 2700*1150*1750 720 ရောနှောကုန်ကြမ်းများအတွက်
ရေပုံးဓာတ်လှေကား31000-2000 6500*1150*500 420 အတောင့်စက်သို့အမှုန့်ပေးပို့ဖို့
floating လုံးလေးများကြိတ် 90
+3.0 1000-2000 3150*1980*1800 4200 floating လုံးလေးများအောင်သည်
+1.1 1000-2000 3500*800*1900 260 ခြောက်သွေ့စက်မှလုံးလေးပေးပို့ဖို့
+4.0 1000-3000 6200*2100*2900 3850 အဆိုပါလုံးလေးခန်းခြောက်ရန်
+1.1 1000-2000 3500*800*1900 260 အေးစက်မှလုံးလေးပေးပို့ဖို့
အအေးစက် / 1000-2500 2120*1600*2900 1550 အဆိုပါလုံးလေးများအအေးရန်
ဆိုင်ကလုန်း / 5.5
+0.75 0.5-1.0M3 850*800*2850 180 အေးစက်နှင့်လိုက်ဖက်
+1.1 1000-2000 3500*800*1900 260 flovar စက်မှလုံးလေးပေးပို့ဖို့
တောင့် flovar အဘို့အဆင်သင့်
+0.55 1000-2000 5500*850*1600 580 တောင့်အရသာသည်
+1.1 1000-2000 3500*800*1900 260 ထုပ်ပိုးစက်မှလုံးလေးပေးပို့ဖို့
အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက် 1.1 1-50ကီလိုဂရမ် / အိတ်
အိတ် / ဇ 2400*800*2940 576 အလေးချိန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးရန်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထိန်းချုပ်မှုစနစ် / / / / အပြောင်းအလဲနဲ့လိုင်းထဲမှာစက်ကိုထိန်းချုပ်ရန် .
လေဖိအား 2.2 / / / ထုပ်ပိုးစက်နှင့်အတူ Mactched
စုစုပေါင်းတန်ဘိုး 24 သတ်မှတ်ချက်များ 225.69KW
1.ကြာမြင့်ချိန်: စက်အတွင်းဆိပ်ကမ်းကိုစလှေတျပါလိမ့်မည် 30 သိုက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း
3.အကယ်၍ နစ်မြုပ်နေသောငါးအစာလုံးလေးများကိုထုတ်လုပ်လိုပါက,သင်က floating extruder ပြောင်းလဲနိုင်သည် နစ်မြုပ်ငါးအစာတောင့်ကြိတ်